Warar sheegaya in Safiirkii Imaaraadka Carabta u fadhiyay Soomaaliya la bedelay – STAR FM SOMALIA
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Safiirkii Dowladda Isutagga Imaaraat-ka Carabta uga wakiilka ahaa Soomaaliya Maxamed Al-Othman. la bedelay.
Warkan ayaa ahaa mid saacadihii la soo dhaafay si aad ah isa soo tarayay, Safiirka ayaa muddo bilooyin ah imaan Muqdisho, waxaa uu ka maqnaa intii uu socday ololaha doorashada, xilligaasoo Imaaraadka si toos ah ugu lug lahaa.
Hase ahaatee Safiirka ayaa lagu arkay magaalada Muqdisho 22-kii bishii hore, maalintii caleema saarka Madaxweynaha cusub, waxaa uu ka mid ahaa wakiilo ka socday 120 dowladood oo lagu casuumay xaflada caleema saarka.
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in aan wali soo gaarin warka ah in la bedelay Safiirka, balse howlaha Safaaradda ee Muqdisho ay yihiin kuwo si caadi ah u socda.
Xarunta Safaaradda Imaaraadka Carabta ayaa ku taal Xeebta Liido ee degmada C/casiis, waxaa Imaaraadka Isbitaal ka hirgelinayaa degmada Shingaani, gaar ahaan halkii horay la oran jiray Visha Bra.
Safiir Maxamed Al-othmaan oo si rasmi ah waraaqaha aqoonsiga looga guddoomay bishii April ee sanadkii 2014 ayaa si toos ugu milmay siyaasada Soomaaliya, isagoo xiriiro dhow la lahaa maamul goboleedyada, waxaa dadka qaar ku eedeeyeen inuu xataa fara gelin ku hayay arrimaha qabaa’ilada Soomaalida.
Safiirka ayaa muddo ku dhow 4 sano ka howlgalayay Muqdisho, waxaana uu ku fashilmay qorshayaal uu qalalaase siyaasadeed ku gelin gaaray hannaanka doorashooyinka iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Imaaraadka Carabta ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay ku lug lahaa arrimaha Soomaaliya, waxaana Imaaraadka ay xiriir fiican la lahaayeen Madaxweynihii hore Xasan Sheekh, inkastoo markii dambe uu xumaaday xiriirkaas, kaddib khilaaf hosoe oo soo kala dhex galay.
Sidoo kale Imaaraadka ayaa xiriir wanaagsan la lahaa maamul goboleedyada Soomaaliya, iyagoo Madaxda maamul goboleedyada ugu yeeray magaalada Dubai, iyagoo kala soo hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid aheyd doorashadii dalka ka dhacday.
Imaaraadka Carabta ayaa heshiis la saxiixday Maamulka Somaliland, kaasoo ku saabsan saldhig Milateri ay ka dhisanayaan garoonka diyaaradaha Berbera, waxaana tallaabada Imaaraadka Carabta ee saldhiga Milateri ka soo hor-jeestay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Dowladda Madaxweyne Farmaajo ayaa ku qanacsaneyn saldhiga milateri ee Imaaraadka Carabta ka dhisanayaan garoonka diyaaradaha Berbera, waxaana arrintan Madaxweynuhu kala hadlay dowladda Sacuudiga, sidii Imaaraadka Carabta uga baaqsan laheyd Saldhigaas.
Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in amniga Muqdisho aanu dowladda gacanta ugu jirin 100%